Qorshaha Mustaqbalka Kooxda Real Madrid Ayaa Waxaa Hogaaminaya Kylian Mbappe Waxaana Sidaasi Qoray Wargeyska AS? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Qorshaha Mustaqbalka Kooxda Real Madrid Ayaa Waxaa Hogaaminaya Kylian Mbappe Waxaana Sidaasi Qoray Wargeyska AS?
Toddoba ka mid ah ciyaartoyga laf-dhabarta u ah Real Madrid waqtigan, waxay ku jiraan da’dii ay xirfaddoodu kusoo gaaban lahayd, muddo kooban kaddibna waxay isku diyaarin doonaan inay gebi ahaanba garoomada ka baxaan oo ay kubadda ka fadhisitaan.
Laacibka khadka dhexe ee Luka Modric oo ah kan ugu da’da weyn kooxda, waa 34 jir haddaba la dareemayo inuu is-dhimay, waxaana ku xiga Sergio Ramos oo 33 jir ah, Benzema oo 32 jir ah, Marcelo oo 31 ah, Gareth Bale, Toni Kroos iyo Nacho waxay jiraan min 30 sannadood.
Saxeexa cusub ee Eden Hazard oo aan wali saldhigin Bernabeu ayaa isaguna aan wax badan ka hoosaynin da’ ahaan laacibiinta kale, waxaanu ku dhow yahay 30 jir.
Xaaladdani waxay madaxweyne Florentino Perez iyo tababare Zidane ku qasbaysaa inay diyaariyaan Real Madrid aanay ku jiraan dhamaan ciyaaryahannada sare ku xusan oo uu ku jiro Eden Hazard maadaama dhaawacyo soo gaadhay ay haddaba dib u dhigayaan waqtigii uu wax u tari lahaa naadiga.
Sida uu sheegay wargeyska AS ee kasoo baxa caasimadda Spain ee Madrid, Los Blancos waxa haddaba ay ka shaqyanaysaa qorshaha waqtiga dhexe ee isku simi lahaa laacibiinta waqtigan ee sii socda iyo kuwa mustaqbalka kooxda hoggaamin doona, kuwaas oo xirfadda iyo khibradda ay ruug-caddaayada gabaabsiga sii ah ka helaan usii gudbin doona laacibiinta funaanadda kala bixi doona.
Madaxweyne Florentino Perez oo og in ay adag tahay in ciyaaryahanno xirfad sare iyo magac leh qiimo jaban lagu helo, waxa uu u leexday inuu laacibiin da’yar kasoo iibsado qaaradda Latin America, kuwo kalena uu ka keeno Yurub, isla markaana uu amaah ku diro si ay xirfaddooda horumar ugu sameeyaan, uguna diyaar-garoobaan difaacista Real Madrid.
Ashraf Hakimi oo ay da’diisu tahay 21 jir, waxa uu ka mid yahay ciyaaryahannada baasha midig ee dunida ugu wanaagsan waqtigan, waxaanu amaah ugu ciyaaraa Borussia Dortmund, laakiin waxa uu dib ugu soo laaban doonaa Bernabeu si uu booska uga riixdo Dani Carvajal oo 28 jir ah.
21 jirka reer Morocco oo sidoo kale ku wanaagsan weerar-geynta kubadda, waxa uu noqon doonaa difaaca midig ee kooxda mustaqbalka, halka garabka bidixna uu Marcelo kala wareegayo Ferland Mendy oo 24 oo haddaba geed iskaga xidhaya laacibka reer Brazil.
Khadka dhexe, Casemiro oo 28 jir ah waxa uu qayb ka noqon doonaa qorshaha kooxda mustaqbalka maadaama da’diisa iyo booska uu ka ciyaaro ay ka caawin karaan in shanta sannadood ee soo socota uu heerka ugu sarreeya u dheelo, waxaana garabkiisa taagnaan doona Fede Valverde oo 21 oo xili ciyaareedkan ka mid ah laacibiinta ugu wanaagsan Real Madrid.
Kubbad-sameeyaha lagu naanayso New Messi ee Martin Odegaard oo 21 jir ayaa kasoo laaban doona naadiga Real Sociedad marka uu soo dhamaysto laba sannadood oo heshiis amaah ah, laakiin waxa suurtogal ah Los Blancos ay xagaagaba soo gaabiso amaahdiisa oo ay kusoo celiso Bernabeu.
Weerarka, sida uu Zidane qorshaynayo, waxa garabka bidix iska yeelan doona Vinicius Junior dhawr iyo tobanka sannadood ee soo socda, maadama uu yahay 19 jir, sidoo kalena Kylian Mbappe ayay Los Blancos kiishkeeda u furi doontaa si ay uga soo qaadato PSG. Heshiiska uu laacibka reer France kula joogo PSG waxa uu dhamaan doonaa badhtamaha sannadka 2022, axaanu diiddan yahay inuu saxeexo qandaraas cusub si uu ugu qasbo naadigaas in badhtamaha sannadka 2021 laga iibiyo Real Madrid haddii kalena uu bilaash kaga tegi doono marka uu waqtigiisu dhamaado.
Weerarka dhexe ee No.9 oo hadda uu Benzema uga ciyaaro, da’diisuna ay xakamayn doonto muddada uu sii joogayo, ayaa waxa uu yahay booska aan illaa hadda go’aanka laga gaadhin, waxaana diiraddu u saaran tahay Los Blancos Erling Haaland oo qandaraaskiisa Borussia Dortmund lagu burburin karayo 75 milyan oo Euro.
Difaaca dhexe, waxa kusii negaan doona Raphael Varane oo 26 jir ah, khibrad badanna kasoo helay sannado guulo qurxiyeen oo uu Bernabeu ku sugnaa, laakiin waxa ay Los Blancos raadin doontaa beddelka Sergio Ramos.
Marka ay shaxda kooxdu sidan noqotay, waxa kale oo Real Madrid ay haysataa ciyaartooyadii beddelka u noqon lahaa khadka dhexe iyo weerarka, sida Reinier, Jovic, Asensio, Rodrygo, Brahim iyo kuwo kale oo u diyaarsan inay mustaqbalka xidhaan funaanadda cas.